Yakanakisa Bubble Bhegi Mugadziri uye Fekitori | Huanna
Chigadzirwa zita: Komputa Inotumirwa Mahwhamvuropu Bubble Yakavharwa Mabhegi Chigadzirwa Chigadzirwa: Zvinyorwa Zvekutumira
Ruvara: Ichena, Yero, Girinhi, Yakasarudzika Zvinhu: Pla uye biodegradable zvinhu
Nzvimbo yeKutanga: Shanghai, China Zita Rekushandisa: Mamiriro ezvinhu
Model Nhamba: HNM-4036P Kushanda: Express Service Kupakata, E-commerce, Kupeta Pallet, Kufambisa Service
Saizi: Yakasarudzika Saizi Ukobvu: Zvinoda Vatengi
Dhirivhari: Mazuva 30-40 Kurongedza: Yakasarudzika
Feature: Biodegradable, Compostable, Kubvarura-chiratidzo, Yakasimba Adhesive, Opaque, Yakakwana Kudhinda, Chengetedzo Rudzi rwebhizinesi: Mugadziri
Yedu bubble mabhegi ndiyo sarudzo yakanyanya kusarudzika yezvinhu zvisina kusimba kana zvakakosha zvemunhu nekutengesa. Pane zviitiko zvakasiyana siyana zvekushandisa, sekutumira zvinhu zvakakosha zvakadai sefoni, kurongedza zvigadzirwa zvisina kusimba semagirazi. Zvakare, inogona kushandiswa kuchengetedza zvinhu zvakakosha, nekuti haina mvura uye inodonhedza humbowo. Mabhegi ebhudzi ane yakakwenenzverwa nemisodzi uye haaremi, nokudaro hapana mubvunzo kuti vanogona kuchengeta zvigadzirwa zvako zvakanaka uye zvakachengeteka vachichengetedza mutengo wekutumira. Tinogona kugadzirisa mavara uye saizi yemabhegi emabhegi zvichienderana nezvinodiwa nevatengi. Isu tinopa mhinduro dzakasiyana nekukurumidza sezvinobvira kusangana nezvinodiwa zvevatengi. Zvikasadaro, isu tine akati wandei matimu akakura ekutaurirana nevatengi, uye fekitori yedu inogona kuburitsa bubble mabhegi eakasiyana maratidziro uye mavara. Ehe, logo uye mapatani akagadzirwa anogona kudhindwa pairi. Saka zvakakosha kune ese ekutengesa uye ega kushandisa. Kunyanya yekutumira 3C zvigadzirwa. Zvishandiso zvinoshandiswa zvehombodo bhegi zvese zvakasikwa, nekudaro iwo 100% inogadzikana uye inogadziriswa. Shandisa bhegi redu rebhegi kuti uchengetedze kutumira kwako kwakachengeteka.
Iyo yakanakisa mukana wemabhegi edu emabhegi ndeye izvo zvinogadziriswa zvigadzirwa. Maitiro ekugadzira haana kusvibiswa, uye zvigadzirwa zvekupedzisira zvinogona kubhadharwa kuti zvimutsiridzwe mune zvakasikwa. Munzvimbo yekugadzira indasitiri, masaga anoputsika zvachose mumazuva zana nemakumi masere. Munzvimbo yekuumba manyowa, bhegi rinodzikisira zvachose mumakore angangoita maviri. Munzvimbo yakasikwa, bhegi racho rinotora makore angangoita matatu kusvika mashanu kuti ridzikisike zvachose.
Kambani yedu iri kuenderera mberi ichishandira vatengi nehupamhi hwepamusoro, mutengo wekukwikwidza uye kuendesa panguva. Isu tinogamuchira nemwoyo wese shamwari kubva pasirese kuti vashande pamwe nesu uye kuwedzera bhizinesi redu. Kana iwe uchifarira zvinhu zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu. Tinoda kukupa iwe nerumwe ruzivo.
Pashure: Yakanakisa yemhando yePurasitiki Kuputira - Pla Straw - Huanna
Zvadaro: CPLA Kucheka